(SAWIRRO) Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo booqday saldhiga ciidamada Kenya ee Dhoobley. | puntlandi.com
Sunday, March 19th, 2017 | Posted by Pi
(SAWIRRO) Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo booqday saldhiga ciidamada Kenya ee Dhoobley.
Madaxweynaha dalka Kenya uhuru Kenyatta ayaa booqday saldhigyada milatari ee Ciidamada Kenya ee qeybta ka ah howlgalka Amisom ku leeyihiin gobolka Jubbada hoose ee Soomaaliya, si uu u dhiiri geliyo ciidamadiisa.
Mr Kenyatta, oo xirnaa dareeska ciidanka milatariga dalkiisa, ayaa la kulmay ciidamo Kenyan ah oo katirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM, kuwaas oo saldhig milatari ku leh magaalada Dhoobley.
Madaxweyne Kenyatta ayaa u rajeeyay ciidamada Kenya inay kor u kacdo kalsoonidooda booqashiisa awgeed.
“Joogitaankiina Soomaaliya waxaad badbaadisay nolol badan, shacabka Kenya waligood idin ma iloobidoonaan,wayna idiin mahad celinayaan. Inaad halkaan joogtaan waxay ugu yaraan shacabka ka xoraysay cabsida Alshabab,” ayuu yiri madaxweynaha Kenya.
Saldhiga milatari ee magaalada Dhoobley ayaa ah xarunta laga maamulo howlgalka AMISOM, waana xarun halbowle u ah mashruuc Qaramada Midoobay ee Soomaaliya.
“Waxaan dowladda cusub ee Soomaaliya kala hadlidoonaa in xooga la saaro muhiimada dhismaha ciidankoda milatariga, si aad idinka dalkiina ugu laabataan, taasina waa qorshaheena ka bixitaanka Soomaaliya,” ayuu hadalkiisa ku daray.
Mr Kenyatta ayaa maalin dhan ku qarash gareeyay inuu ogaado sida ciidamadiisu u shaqeeyaan. Wuxuu sidoo kale la qaatay Qado, wuxuu kaloo indho indheeyay hubka ay u isticmaalayaan dagaalka ka dhanka ah Alshabab.
Taliyaha ciidanka milatariga Kenya Gen Samson Mwathethe, ayaa ku wehliyay safarka madaxweynaha Kenya ku tagay saldhiga Amisom ee Dhoobley.